रु रु जलविद्युत् परियोजनाको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन | Artha News Nepal
Home	आईपीओ	रु रु जलविद्युत् परियोजनाको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । फागुन ७ गतेदेखि विक्रीमा आएको रु रु जलविद्युत् परियोजना लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज (शुक्रवार) अन्तिम दिन रहेको छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि लागि आईपीओ विक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नं. ६ र ७ का स्थानीयहरुका लागि प्रतिशेयर रू. १०० अंकित दरको ४ लाख ७ हजार ७०५ कित्ता आईपीओ विक्री खुला गरेको हो । यो आईपीओ खरीदका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ४ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनीको आईपीओ विक्री प्रवन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयर सफ्टवेयर र मेरो शेयर मोवाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।
कम्पनीको यो आईपीओलाई इक्रा नेपालले समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने मध्यम रुपको सुरक्षित संकेत गर्ने इक्रा एनपी त्रिपल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ । हाल संस्थापकहरुबाट मात्र चुक्ता भएको पूँजी रू. ३२ करोड ६१ लाख ६४ हजार ४०० रहेको छ ।
आईपीओ पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ४० करोड ७७ लाख ५ हजार ५०० पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रू. ६ करोड १४ लाख ४७ हजार खुद नाफा गरेको यस कम्पनीको उक्त अवधिसम्म प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११८ दशमलव ८४ रहेको छ ।
यस कम्पनीले गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा ५ मेगावाट क्षमताको रु रु जलविदुत परियोजना निर्माण गरी २०७१ साल चैत ९ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन शुुरु गरेको छ ।
उक्त आयोजनाबाट प्रतिदिन ४ दशमलव ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म यस आयोजनाले रू. ५ करोड १२ लाख ४८ हजार बराबरको विद्युत उत्पादन गरी विद्युत प्राधिकरणलाई विक्री गरेको छ । जुन गत आवको तुलनामा रू. ४ लाख ६६ हजार बढी रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
ipoipo of rurururu hydro iporuru iporuru jalbidhyut ipoआईपीओ
आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका १६ कम्पनी
इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गर्दै
एक अर्ब ५ करोड मुल्यको आइपीओ आउँदै,यस्तो छ कम्पनीको प्रोफाइल